आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा Porn Movie हेर्नु हुन्छ भने साबधान हुनुहोस | Rochak Khabar
आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा Porn Movie हेर्नु हुन्छ भने साबधान हुनुहोस admin
सोही कारण मोबाइलमा पोर्न हेर्ने मानिसहरुको संख्या बढिरहेको छ । अब कैयन् एपहरुबाट पनि पोर्न हेर्न सकिने भएको छ । मानिसहरु केवल गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध एप्सको माध्यमबाट मात्र होइन ब्राउजरमै विभिनन वेबसाइट सर्फ गरेर पनि पोर्न हेर्ने गर्छन् ।पोर्न हेर्ने कुरा पूर्ण रुपमा निजी मामिला हो । पोर्न सामाग्री हेर्नबाट रोक्ने कानूनी व्यवस्था हामीकहाँ खासै छैन । तथापि इन्टरनेट पोर्न हेर्दा ठूलै होसियारी अपनाउनुपर्छ । अझ आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट त सकेसम्म इन्टरनेट पोर्न नहेर्दा राम्रो हुन्छ । आखिर स्मार्टफोनबाट इन्टरनेट पोर्न किन हेर्नुहुँदैन त ? कारण यस्ता छन्ः
मेरो श्रीमान मसँग दिनकै तीन-चारचोटिसम्म सेक्स गर्नुहुन्छ तर ...? 3,400
सम्भोग गर्दागर्दै प्रेमीले कण्डम निकालेपछि…बलात्कारको दोषी ठहर 848